Friday November, 27 2020 - 13:33:00
Wednesday September 16, 2020 - 09:43:08 in by salman abdi
"Wiilkeygu dad ma dilin , dad ma dhicin, guri ma xadin,darooga ma cunin, wiilkayga dambiga Mareykanka looga kaxeeyanayo anagu waan garan waaynay," ayay tiri hooyo Maryan.
"Anagana waan rafaadnay,qareenno badan ayaan u qabanay , in badan ayaan looyaro u raadinay, midkaan u tagnaba waa lagaga guuleystay kiiska, aad iyo aad baan u rafaadnay, waxaan aad iyo aad uga xumahay caruurtiisa yaryar iyo aabahood oo la kala kaxeynayo,waa caruur aad u yaryar, waa 4 jir, labo jir iyo wax aan sanad gaarin", ayay tir hooyo Maryan.
"Xaggaas wax dad ah uma joogo, qoyskiisa halkan ayuu wada joogaa hooyo haday tahay, aabo haduu yahay, wax dad ah oo ka sii horeeya ma laha," ayay tiri Hooyo Maryan oo ay murugo ka muuqatay.
Madaxa hay'adda Jeylaan Xuseen Cair
Hay'adda lagu magacaabo Cair waa hay'ad u doodda xuquuqda Muslimiinta Mareykanka qeybta minnesota waxayna walaac ka muujisay dadkan Soomaalida ah ee laga musaafurinayo dalka Mareykanka.
Madaxa hay'adaasi Jeylaan Xuseen ayaa BBC u sheegay in dadkani loo haysto waxyaabo kala duwan, balse ay u badan yihiin dad aan haysan sharciga Mareykanka.
"Dambiyada lagu haysto waa dambiyo kala duwan, inta badan waa sharci la'aan, waa dad sharcigii dalbaday oo sharcigii loo diiday ayaa ku jira dadka hadda la musaafurinayo," ayuu yiri Mr Jeylaani.
Soomaalida ugu badan ee Mareykanka waxay deggan yihiin Minnesota
"Runtii waan la wada xiriirnay , safaaradda waan la xiriirnay, dad badana waan la xiriirnay, haddana waxaan rabnaa dowladda Soomaaliya inay go'aan ka gaarto ayaan rajeynaynaa sidii dadkan laga joojiyo in la musaafuriyo," ayuu yiri Mr Jeylaani.
Madaxa hay'adda u dooda xuquuqda Musliminta Mareykanka ayaa dhanka kale ka digay in dadka Mareykanka laga musaafurinayo lana gaynayo Soomaliya ay qarakood qabaan Corona islamarkana ay dalka gaarsiin karaan xanuunka.
"Dadkani waxaa jira dad qaba cudurkii Covid-19, waxaa laga yaabaa xitaa dadka ay diyaaradda isla saaran yihiin inay qaadsiiyaan wadankiina gaadhsiiyaan," ayuu intaa ku daray Mr jeylaani.
Arrintan ayaa waxaa horey walaac uga muujiyay hay'adaha u dooda xuquuqul insaanka oo ak digay in meelaha lagu celinayo ddaka qaar ay yihiin goobo aan amnigoodu wanaagsanayn.
Maxamuud Cartan: "Sidee looga hortegi karaa musuqmaasuqa"
05/11/2020 - 11:22:41
Radio Hargeysa iyo SNLTV oo aan weli si rasmi ah looga baahin Lagu Dhaliilay Xukuumada S,land.
22/10/2020 - 18:34:12
Mudaharaad Ka Dhacay Dagmada Qorulugud Oo Looga So Horjeedo Kufsi Ka Dhacay Magalaada Hargeysa.
22/10/2020 - 13:15:48
11/10/2020 - 16:47:23